Sida Loo Duubo Shaashadda Computerka ayada oo la Adeegsanayo Barnaamijka OBS STUDIO - AqoonKaal.com
Tuesday, October 27, 2020 9:47 pm
Booqo http://Youtube.com/Aqoonkaal si aad u daawato videoga ku saabsan sida loo duubo shaashadda coputerka.
Ka soo rogo websiteka https://obsproject.com/
Barnaamija OBS Studio waxaa loo adeegsadaa in lagu duubo shaashadda computerka, qaybaha uu ka kooban yahay OBS waxaa ka mid ah:
“Sources” waa meesha aad ka dooraneyso nidaamka aad u duubto shaashadda computerka. Tusaale ahaanhaddaad duubeyso muuqaal ka muuqda shaashadda, riix calaamadda (+) ee ku hoos qoran Sources, kaddib riix “Display Capture” – shaashadda soo baxda waxaad u dhaafi kartaa cinwaanka ku qoran ama mid cusub ayaad ku qori kartaa. Xaqiiji in ay calaamad santahay barta “Make source visible”. Markaas riix “OK”
Shaashadda xigta barta “Display” waxay muujineysaa cabbirka guud ee shaashadda computerkaaga (Display Resolution). Computerkaaga cabbirkiisa si aad u xaqiijisisd, shaashadda computeka ku guji dhanaka midig ee hagaha, kaddib eeg “Display Resolution”, haalkaas computerka aan adeegsanayo waa 1366×768. Sidaas daraadeed tayada ugu wanaagsan ee aan computerkani ku duubi karo waa 720p = 1280 x 720 – taas oo loo yaqaan HD. Waxaase ka si casrisan computerada shaashaddoodu duubi karto 1080p waayo shaashadda ayaa ah 1920 x 1080. Waxaa ka sii caalamisan computerada duubi kara 4K ama 2160p waayo shaashadoodu waa 3840 x 2160 oo loo yaqaan UHD.
Xaqiiji in ay calaamdsan tahay barta “Capture cursor” – waa haddii aad dooneyso in marka aad shaashadda duubeyso in uu ka dhex muuqdo hagaha (mouse). Markaas riix “OK”.
Haddii aad dooneyso in aad tirtirto, riix magacii aad u bixisay, markaas guji calaamdda (–), markaas guji “Yes”.
Fallaaraha kor iyo hoos, waxaa loo adeegsadaa in qaybtii la rabo la hor mariyo. Xaqiiji shaashadda aad duubeyso in ay ugu sarayso.
Sida ugu fudud ee loo agaasimo qaabka uu ku soo baxayo video shaashadda aad duubeyso, waa in aad aad riixdo “Tools” > Auto-Configuration Wizard > Optimize just for reording > Next > halkaas ka xulo shaashadda computerkaaga. Kaddib riix “Next” markaas barnaamijka OBS Studio waxa uu kuu xulayaa nidaamka ugu haboon ee uu xamili karo computerka aad adeegsaneyso.
Waxaa jira hannaan loo xulan karo qaab adigu aad dooratay, taas oo loo maro qaybta “Settings”.
Waa qaybta laga agaasimo codka computerka, waxayna ka kooban tahay:
Desktop Audio: Waxa uu suurtageliyaa in la duubo codka barnaamij ku jira computerka, tusaale ahaan waxaad duubi kartaa cod ku jira compuetrka, ama waxaad duubi kartaa Game uu la socdo codkiisa. Si aad taas u xaqiijiso, riix batoonka giraanta (setting) > Properties > dooro default
Mix/Aux: Waa meesha laga dooranaya nooca magarafoonka lagu xiriiriyey computerka ee aad codka ku duubeyso. Riix batoonka (setting) > Properties > dooro magarafoonka aad adeegsanayso.
Shaashadda guud ee OBS Studio waxay u qabsan tahay:
Scenes | Sources | Audio Mixer | Scene Transitions | Controls
Scenes: Waa masraxiyadda la adeegsanayo si loo duubo qaybo isku dhafan oo shaashadda computerka ah.
Sources: Waa meesha laga xulanayo waxa la duubayo oo noqon kara shaashadda, ama live barnaamij uga baxaya youtube, ama sawirka qofka hadlaya oo wax sharaxaya, iwm.
Audio Mixer: Meesha laga xakumo tayada codka uu yeelanayo video aad duubtay.
Scene Transitions: Qaabka la isugu xiriirinayo masrixyadaha kala duwan iyo muuqaalada oo la is dhex gelinayo si loo hagaajiyo qaabka video isugu xiriirsan yahay.
Controls: waxaa qaybtan hoos yimaada meesha laga duubo shaashadda “Start Recording” (oo marka la duubiayo isu bedeleysa “Stop Recoding” si loo joojiyo duubista. Waxa kale oo qaybtaas ah “Start Streaming” oo si live ah barnaamijka loogu baahin karo Youtube, Facebook, iwm. Sidoo kale waxa qaybta “Controls” hoos yimaada “Settings” oo ah meesha laga agaasimo sida ugu wanaagsan ee ay noqoneyso shaashdda la duubayo iyo muuqalka guud ee OBS Studio.
Settings: waxaa hoos yimaada:
General: Halkaas waxaad ka dooran kartaa luqadda iyo sida uu e kaanayo OBS, sida muuqaal dugul ah (Dark) ama muuqaal xareed ah (System).
Stream: oo laga agaasimo sida barnaamijka LIVE ah loogu baahiyo Youtube, iwm. Waxaad baahan tahay fure khaas ah oo aad ka heleyso qaybta aad ka maamusho Youtube-kaa.
Output: oo laga dooranyo meesha uu barnaamijka OBSSTudio ku xeryaanyo shaashdda aad video ka duubtay.
Audio: oo ah meesha si xeel dheer looga maaraynayo codka.
Video: Waxaa laga agaasimaa qaabka loo duubayo video shaashadda computerka.
Hotkeys: Waxaa laga xulan karaa batoonada sida gaarka ah loo adeegsanayo marka la duubayo shaashadda.
Advanced: Waa xog dheeraad ah oo ku saabsan agaasimidda OBS Studio.
Magarafoon Lagu Duubo YouTube
BOYA BY-M1 Pro: Halkan ka eeg https://amzn.to/3g4fqhF (Amazon affiliate link).
Headphones for Kids (Carruurta)